I-Janur Bungalow-Ejwayelekile 1 - I-Airbnb
I-Janur Bungalow-Ejwayelekile 1
Borobudur, Magelang, i-Indonesia
Ikamelo e-i-bungalow ibungazwe ngu-Bobby
U-Bobby Ungumbungazi ovelele
Ithempeli lami litholakala cishe ku-3km ukusuka ethempelini elihle laseBorobudur (isakhiwo samaBuddha esikhulu kunazo zonke emhlabeni) futhi
sizungezwe irayisi field & Menoreh izintaba ezingaba ukunikeza amazing nature isipiliyoni.
Ungakwazi ukujabulela imvelo eshisayo eshisayo nempilo yasepulazini futhi ujabulele impilo yasendaweni namasiko ngokumamatheka okumnandi kwe-Javanese endaweni. Ukuhamba njengendawo ~ :D
Maphakathi nenkundla yerayisi kanye nombono we-Mountine nge-Garden
*I-Wifi iyatholakala endaweni yomphakathi kodwa Ayikho i-TV
(Elinye igumbi lethu)
4.96 · 57 okushiwo abanye
Siseduze nethempeli laseBorobudur(5mimutes by motor). Simaphakathi nedolobhana lendawo elizungezwe insimu yerayisi nokubuka kwentaba-mlilo. Ngesikhathi sokuhlala kwakho ungajabulela impilo yasendaweni yangaphandle, impilo yasepulazini, isiko lendabuko laseJava endaweni yangakithi ngokuhamba ngebhayisikili noma ukuhamba ngezinyawo noma ukuxhumana nabantu bendawo emgwaqeni. Ukuhamba njengomuntu wendawo kungaba yindlela enhle kuleli dolobhana.
Sisendaweni yamaSulumane njengeningi lase-Indonesia ukuze ukwazi ukulalela umsindo othile ovela eMosque izikhathi ezi-5 ngosuku.(-kuhlanganise nosuku oluthile lomcimbi okhethekile). Sicela uqonde futhi uhloniphe lesi siko.
Hlola ezinye izinketho ezise- Borobudur namaphethelo